Tamin’io fotoana io ao amin’ny»Hijery akaiky»nametraka lavitrisa tsiroaroa, manao azy malaza indrindra Mampiaraka fampiharana eo amin’izao tontolo izao. Isika eto mba hanampy anao na aiza na aiza misy anao dia mety ho, isika dia eo foana. Raha te-hihaona olona vaovao, hanitatra ny ara-tsosialy faribolana, mahita namana mba handeha na ho velona amin’izao fotoana izao, dia any.»Hijery akaiky»fotsiny dia tsy hoe fomba iray tena haingana dia haingana ny laza tsy mitsaha-mitombo ny fangatahana dia hanampy mba hampianatra bebe kokoa noho ny tapitrisa vaovao tsiroaroa isan’andro. Inona fampiharana hafa mahavita izany.
Mahita ny mpivady
Mamatotra ny fifandraisana. Manomboka Mampiaraka.»Hijery akaiky ny»ny mety sy ny mora swipe zo tahaka na ho amin’ny ankavia ny ho any ny manaraka ny mombamomba. Raha na iza na iza tianao, asio fiverenana»toy ny»ianao roa. Efa mandroso ny rafitry ny fiaraha-mientana ifampizarana fanekena, raha ny endriky ny mpivady iray ihany no azo atao raha misy ny fiaraha-mientana ifampizarana liana.
Tsy misy ny adin-tsaina
Tsy misy dikany ny fanilikilihana. Fotsiny swipe manerana ny efijery mba hahita mpivady sy manomboka mifampiresaka. Avy eo hifindra amin’ny fifandraisana avy ao amin’ny virtoaly fiaramanidina amin’ny tena mandamina ny fivoriana, izay mety ho ny niandohan’ny zavatra vaovao.
Ary ankehitriny. tonga ny fotoana hanombohana ny fikarohana. Tsarovy: raha miahiahy swipe ny varavarana lamba ho amin’ny tsara. Minoa ahy, arakaraka ny safidy misy, ny rosier ny fanantenana.
Tonga soa eto amin’ny»Fiarahana amin’ny lafiny»ny lehibe sy tsara tarehy ny fiaraha-monina iray ny olona eto amin’izao tontolo izao. Misalasala mba hanatevin-daharana.
BEBE KOKOA NY ASA.
Vaovao farany ny fampiharana ny dikan -«Hijery akaiky»Miampy sy hahazo ny fidirana amin’ny premium endri-javatra: tsy manam-petra»toy ny»araka izay ilaina ny Maneho ny fiaraha-miory, na ny olona;»Pasipaoro»mifandray amin’ny olona, mitady ny mpivady, manerana izao tontolo izao;»Rewind»mba hanome olona hafa afaka manaporofo ny tenanao; rehefa mampiasa ny»Fipoahana»tao anatin’ny iray volana hijanona ho mpitarika ambony ao amin’ny voafantina fikarohana faritra ho an’ny minitra, sy fanampiny»toy ny»mba hahazo nahatsikaritra eo an’arivony hafa.
NY ASA FANOMPOANA AMIN’NY SEHATRA VOLAMENA
Fanavaozam-baovao ho an’ny»Hijery akaiky»hankafy kilasy voalohany asa:»ID»,»Rewind». Ary izany tsy ny rehetra. Afaka mamonjy ny fotoana sy ny ezaka amin’ny»toy ny», izay mamela anao hahita izay nanome anao»toy ny»alohan’ny manapa-kevitra ny hametraka ny reciprocal»toy ny», na mitsambikimbikina ny amin’izao fotoana izao no jerena ny mombamomba. Eritrereto izany endri-javatra toy ny mpanampy manokana, vonona amin’ny fotoana rehetra ny andro na alina, mba hanome anareo vaovao momba ny zava-baovao mety ho mpivady. Mipetraka indray, aina, haka ny toerana tena zava-pisotro sy mankafy ny mijery ny mombamomba azy. Veloma, havizanana avy amin’ny lava-pikarohana ho an’ny mpivady
← Free chat tsy misy fisoratana anarana
Chat tsy misy fisoratana anarana: Mpanadala angon-drakitra tsy misy miditra ao →